U Moe Aung  – HlaMin
Updated : June 16, 2019
Article from Myanmar Mudita in April 2018
Poem in the RIT Annual Magazine 1984
Saya U Moe Aung isaPatron of Swel Daw Yeik Foundation.
His pen name is Tekkatho Moe War.
His mentors include Daung Nwe Swe.
Saya has written hundreds of Kabyars. Some (e.g. Shwe YaDu Lann) took four days of contemplation. Saya has also composed some Kabyars “Let Tann” (extemporaneously).
Saya has published only two Kabyar books.
Saya served as Editor for RUESU Magazine. Saya served as Chief Editor of the commemorative Swel Daw Yeik Sar Saung, Swel Daw Yeik Magazine, Hlyat Sit Sar Saung, and RIT Annual Magazines.
Saya has published books (e.g. compilation of articles and poems).
I have posted saya’s poems and articles (often with my loose renderings).
“ ကျွန်မအနေနဲ့ ဒီလိုဂုဏ်ပြုမှုတွေ ဆုတံဆိပ်တွေကို အလေးမထားပါဘူး။ မိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့ သူတို့ဖြစ် သင့်သလို လေးနက်တည်ငြိမ်မှုမရှိတာကိုတော့ ကျွန်မ စိတ်မကောင်းပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ခင်မင်မှု ဆိုတာ နားလည်မှုပဲ။ အခြေခံအားဖြင့် ကိုယ့်အထင်နဲ့ကိုယ် ဆုံးဖြတ်တာထက် နားလည်မှုပေးဖို့ကြိုးစားခြင်းလို့ ကျွန်မထင်တယ်။ ဒါပေမဲ့… ဆုတံဆိပ်တွေဆိုတာကတော့ လာလိုက် သွားလိုက်ပါပဲ။ “
[ဂျပန် NHK သတင်းဌာနသို့ ပြောကြားသည့် ဆုတံဆိပ်နှင့် ပတ်သက်သော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ စကား…]
ယင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ဆုဟူသည်မှာ လာလိုက်သွားလိုက် နှင့် မြဲသည်ဟူ၍မရှိခြင်းအပေါ် ဓမ္မတရားဖြင့် ဆင်ခြင်ကြည့်မည်ဆိုပါက စာရေးသူရေးခဲ့သော မမြဲခြင်း၊ အမှန်တကယ်မရှိခြင်း ပညတ် သဘောကို ထင်ဟပ်သည့် အောက်ပါကဗျာကို ပြန်လည်တင်ပြပါသည်။
” လာခြင်း၊ သွားခြင်း “
လာလာ သွားသွား၊ လှုပ်ရှား သတိ
မရှိ တစ်လှည့်၊ ရှိ တစ်လှည့်နှင့်…..။
“သြော်.. အိမ်ကပဲ” လို့….
ရယ်ကျဲကျဲပြော၊ စောကြော နက်ရှိုင်း
ခိုင်းနှိုင်း လက်တွေ့၊ မေ့နေကြချိန်
‘အိမ်’ ဆိုသည်ကော ရှိလို့လား….။
“မိတ်ဆွေ- ဘယ်ကိုလဲ ….”
ဦးတည်ရာ အရပ်၊ တတ်အပ် ညွှန်းဆို
အတွေး ဆင့်ကဲ၊ ကွန့်မိဆဲပေါ့
‘မြို့ထဲ’ ဆိုသည်ကော ရှိလို့လား….။
သည် ခန္ဓာကော ….
ဘယ်မှာ ဘယ်ဆီ၊ ဖြစ်တည်ပြီးစ
ဘယ်က လာခြင်း၊ ဘယ်ကို သွားခြင်း
ဒေသ အရပ်၊ မရှိတတ်ခဲ့
အမှန်သာ မနားမရပ် လည်ပြီကော။ ။
(၁၇ ဧပြီ ၂ဝ၁၈)
မြန်မာနှစ်ဆန်း ၁ ရက်နေ့
[မြန်မာမုဒိတာ စာစောင် – ဧပြီလ ၂ဝ၁၈ ထုတ် တွင် ပုံနှိပ်ဖော်ပြခဲ့ပြီး]
Thanks to Saya U Soe Paing for his great endeavour in visiting the UCL (Universities’ Central Library) numerous times [in January 2012] to gather and record invaluable information relating to RIT (and BOC college of Engineering as well). And thanks to you for archiving all through your emails and keeping all RITians gelled together.
Only when did Saya U Soe Paing mention Engineering Students’ Magazines, that I happen to recall one Engineering Students’ Magazine in which I was part of it. That was in Academic Year 1960-1961. I was still an Electrical Engineering Student at that time (2nd year, or, by the present calling, 4th year). At Rangoon University (Main University) they hadaUniversity Students’ Union (in Burmese, Thud Meg-ga is translated as Union), and we had correspondingly an Engineering Students’ Union as well at our Faculty of Engineering at Leik-Khone (Dome), Prome Road.
At that time I met one Ko Hla Tin (Civil) who was my senior and several years older than me, staying at Prome Hall which was adjacent to Leik Khone, only separated byafence. He was an avid poet (pen name Kay-tu Win Tint, from Taunggoo) and I used to visit his room at Prome Hall to talk about poems and literature during lunch or break times. I also met one senior (can’t recall his name, I think Ko Sein Hlaing) who was the Secretary of the Students’ Union. After some lively discussions, we decided to issue an Engineering Students’ Union Annual Magazine and they made me the Chief Editor. The Magazine consisted of two sections, Burmese and English, of which Saya U Aung Khin (Mech) was the English Editor.
I still have the 1960-61 issue neatly tucked inacupboard in Yangon.
Now I remember that Ko Sein Hlaing (EE?) is still in Yangon, helping to look after his grand children, but not in good health. Ko Sein Hlaing’s daughter was my daughter’s very close friend since their childhood days. We met once in Singapore about 12 years back.
Dear Ko Hla Min, this is the time to reminisce and be happy about the good old days and try to fly back with whatever time machine we could get hold of. Time really flies and we should realize that our days are numbered.
Cover Design : Khine Tin
Poem : “Ah Tway” (by Tekkatho Moe War @ Saya U Moe Aung)
Illustration : Bagyee Aung Soe (Nationally acclaimed artist)
Saya’s thoughts on “Life asaseries of examinations”
ရန်ကုန်စက်မှုတက္ကသိုလ် နှစ်လည်မဂ္ဂဇင်း အမှတ် (၁၃) ၊ ၁၉၈၄ခုနှစ်ထုတ်။
မြို့ပြ အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့ရ ပန်းချီဆရာ – ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် ခိုင်တင် ၏ မျက်နှာဖုံးပန်းချီ။
စက်မှုတက္ကသိုလ်ကျောင်းတော်ကြီးကို လွမ်းနေမိရင်း ၊ အတွေးပေါင်းစုံ – အတွေးနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း တွေးနေမိရင်း၊ ယင်း မဂ္ဂဇင်း၌ ရေးခဲ့သော “အတွေး ” ကဗျာ…..
ကွယ်လွန်သူ ပန်းချီအောင်စိုး၏ သရုပ်ဖော်ပုံဖြင့် စာရေးသူ၏ ကဗျာ……
လောက စာမေးပွဲတွေ ရော စာမေးပွဲပေါင်းစုံကို ခန္ဓာတည်မြဲနေသရွေ့ မရပ်မနား တရစပ်ဖြေနေရဦးမည် ….။ မိမိဘာသာ အအောင်အရှုံး ဆုံးဖြတ်နိုင်မည်လား ?
” အတွေး “
ဟပ်ထင်ပြသည့် ၊ အောက်ချ မျက်လွှာ
စာဖြေမေးပွဲ ၊ ခန်းကျဉ်းထဲ၌
ဝဲလည် ပတ်ချာ သံသရာ။
ဘဝ အတွက်လား ….
ဓန အတွက်လား…၊ ကွဲပြား မသိ
ဝန်ပိ ဇွတ်တိုး၊ ဖလံပိုးထင့် …။
မွေးစ မှသည်၊ မပီပြင်စွ
ဘဝ စာမေးပွဲ ၊ ဓန စာမေးပွဲ
အတ္တ စာမေးပွဲ ၊ ပရ စာမေးပွဲ
ရာဂ စာမေးပွဲ၊ ဓမ္မ စာမေးပွဲ
မရဏ စာမေးပွဲ ၊ စာမေးပွဲ တွေ
အခဲလိုက် အဆုပ်လိုက် ၊ ရင်ခွင်ပိုက်လျက်
ဖြေဆိုပြီးရင်း ၊ ဖြေဆိုရင်းနှင့်
ဆင်း တက် လှေကား၊ သွား ပြန် လမ်းမြှောင်
ခင်းကျင်း မပြ၊ ကာလ ဝေဒနာ
ကျလာ ကွယ်ဝှက် ကျားကွက်များ …။
စိုးရိမ် သောက …
ဝဲလည် ပတ်ချာ ၊ သံသရာ မှာ
ငါလည်း သားကောင် ဖြစ်နေ၏။ ။
၂၈ စက်တင်ဘာ ၁၉၈၃
(နံနက် ဝဝ:၄၄ နာရီ)
in memory of “Shwe Duo”
Saya U Tin Shwe (EP66) and Saya U Hla Shwe (T69)
” ရွှေ နှစ် ရွှေ သို့ ”
( ကိုတင်ရွှေ- လျှပ်စစ်စွမ်းအား နှင့် ကိုလှရွှေ- ချည်မျှင် သို့)
Loose rendition of Saya’s poem by U Hla Min
I don’t believe I had any classes from Saya U Tin Shwe, may be some Tutorials and/or Lab. I used to hang out with Saya U Hla Shwe at အားကစားမှူးကိုမောင်မောင် office as it was somewhere between Civil and Textile departments. That office was usually crowded with Sayas including U Win Maung (Civil), U Maung Maung Than (Textile) among others. We played/bet darts, talked all the crazy stuff, very few students were there, myself and the other student, who wasalong distance runner as well as National Badminton player.
I met them both at the first Reunion in Yangon the last time.
May both their souls rest in peace. And thanks Saya U Moe Aung for the beautiful poem honoring them.
Heart rending poem by Tekkatho Moe War
Rendition of the Kabyar